PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - EZEMISAKAZO:
Ilanga langeSonto - 2018-10-07 - Ezikaqedisizungu -
NGESONTO eledlule bekwethulwa ngokusemthethweni izindlu ezintsha zokusakaza zesiteshi igagasi FM eselisakazela ecornubia Mall. Le ndawo yinxanxathela entsha yezitolo eyakhelene neverulam, Mount Edgecombe, Waterloo ngaphesheya nje komhlanga wodumo.
Phambilini lo msakazo ubuzishutheke emhlanga okuyindawo eyaziwa ngelabadla izambane likapondo. Obekungiphazamisa umoya ngale ndawo nokungenze ngabona kuyisinqumo esiphusile ukusuka kuyo wukuthi ibisesithe, ikakwe ngama- call centre agcwele kule ndawo nobekwenza kungabilula ukuyithola.
Belishuthekwe phakathi kwelinye ibhilidi elisemigwaqweni engadume ngalutho usolistice nozenith. Bekungakuhle ukuba belisemhlanga nje beliphakathi egateway yodumo njengoba kunezinkulungwane zabantu ezihambela le nxanxathela nsuku zonke.
Iqiniso lithi abalaleli bayathanda ukuvakasha eziteshini abazilalelayo nengikholwa wukuthi yingakho inhlangano enkulu yokusakaza kuleli ISABC yathi uma yakha ezayo izindlu zokusakaza yase yakha namawindi angobhazabhaza ukuze uma uvakashele khona ukwazi ukubona okwenzeka ngaphakathi.
Sikhuluma nje uma useAuckland Park egoli lapho iziteshi eziningi zizinze khona nakuba ezinye zingaphansi kungelula ukufinyelela kuzo, la phezulu uzofica abalaleli bethokoziswa wukubuka okwenzeka emetro FM noma E-5FM njengoba kuyizo abagabise ngazo.
Abasethekwini nje ubafica begcwele iwindi la kusakazela khona ukhozi FM nsuku zonke. Nasebusuku imbala uyabaf
Isenzo segagasi-ke siwub hlakani ngoba lizosondelan nabalaleli abahambela lezi zitolo.
Ubukubona lokhu noma u kashele eshaka Marine Wor njengoba benaso i-studio es ncane khona abajwayele uk sebenzisa ngezimpelasonto ngamaholide ngoba ngikhol wukuthi basuke benzela kh ukuthi abantu babo bakwaz ukubabona.
Nalabo abebengazi lutho ngalo sebezokwazi manje nj ngoba lisakazela endaweni nakala ungena nje ngaphak Okuhle wuk